पल शाह पोखरा पुगेपछि अब के हुन्छ ? भिडियो हेर्नुहोस् – Sandes Post
पल शाह पोखरा पुगेपछि अब के हुन्छ ? भिडियो हेर्नुहोस्
March 29, 2022 250
एक नाबालिग गायिकालाई जब’रजस्ती क’र’णी गरेको मु’द्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका अभिनेता पल शाह जिल्ला अदालत तनहुँको थुनछेक आदेशविरुद्ध मंगलबार पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत पोखरा जाने भएका छन् ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनले आज उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिने तयारी गरेका हुन् । पल पक्षका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्लेका अनुसार सोमबार नै उच्च अदालत जाने तयारी थियो । ‘समय अभावका कारण हिजो जान सकेनौं । आज उच्च अदालत पोखरा पुगेर पुनरावेदन निवेदन दिँदैछौं’, उनले भने ।
जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट थुनछेक बहस भएपछि १० चैतमा जिल्ला अदालत तनहुँले शाहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने थुनछेक आदेश जारी गरेको हो ।
७ चैतमा अनुसन्धान सकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको आधारमा ८ चैतमा सरकारीको वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत तनहुँमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गायिकालाई सुटिङका क्रममा विवाह गर्ने भन्दै प्रेममको झुठो नाटक देखाएर पटक पटक कर णी गर्दै आएको भन्दै ११ फागुनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा उजुरी परेको थियो । भिडियो हेर्नुहोस् ।
अन्तिम पटक १४ वैशाख २०७८ मा शुक्लागण्डकी नगरपालिका(४ दुलेगौंडास्थित प्रदिप थापाको घरमा राति १२ बजेतिर ती बालिकाको कोठामा प्रवेश गरेर शाहले ललाइफ काइ जब रजस्ती क रणी गरेको उनका अभिभावकले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । १५ फागुनमा तनहुँ प्रहरी समक्ष आएर पलले आ त्मसर्मपण गरेका थिए ।
Prevखुट्टाको औलाको आकार बाट थाहा पाउनुस् आफ्नो स्वभाव
Nextओलीकै कारण लोडसेडिङ हटेको कुलमानले नै गरे पुष्टि
२०२२ को पहिलो सुर्यग्रहण : भरणी नक्षत्र र मेषमा ग्रहण हुने, यी ४ राशिलाई फाइदा !
लोक गायिका मन्जु पौडेलकि आमाले संसार छाडिन ,यसरी काखमै गयो सास ,मातातिर्थ एकदमै खल्लो (हेर्नुस् भिडियो )